Mpampianatra fizahan-tany no mitazona atrikasa Spirit of Hospitality any Jungle Kambodziana
Home » Vaovao momba ny dia momba ny fanabeazana » Mpampianatra fizahan-tany no mitazona atrikasa Spirit of Hospitality any Jungle Kambodziana
Ny oniversite malaza any Bangkok dia nanolotra atrikasa fananganana fahaiza-mandray vahiny amin'ny mpanome tolotra fizahantany eo an-toerana amin'ny làlan'ny fizahantany any amin'ny valan-javaboary Botum Sakor, Kambodza Andrefana, 2-5 martsa 2019.
Ny atrikasa dia notarihin'i Dr Scott Michael Smith avy amin'ny Departemantan'ny fandraisam-bahiny sy fitantanana fizahan-tany ao amin'ny University of Assump. Ny hetsika izay natao tao amin'ny Campamom Tented Camp dia notohanan'i YAANA Ventures, mpamatsy vola fizahan-tany maharitra any Bangkok.
Mpitari-dalana mitsangantsangana roa ambin'ny folo, mpiasan'ny birao anoloana, mpikarakara tokantrano, mpandroso sakafo, mpahandro sy mpamily sambo, avy amin'ny tanàna eo an-toerana ary miasa ao amin'ny toby, no nandray soa tamin'ny fiofanana nandritra ny roa andro "Spirit of Hospitality", izay notarihan'ny mpandrindra ny tetik'asa, Dr Scott Michael Smith, avy amin'ny Assuming University Thailand.
Ny mpanorina ny YAANA Ventures, Willem Niemeijer, dia nilaza ny momba io fiofanana io: “Ny tanjon'ny Cardamom Tented Camp dia ny hanohana ny ezaka fiarovana ny Wildlife Alliance miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Izahay dia miombon'antoka amin'ny fiantohana ny fizahan-tany amin'ny fomba maharitra, mampiseho fa afaka mitondra anjara biriky tsara amin'ny fiarovana izay misy sy mahasoa ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana. Ny “Atrikasa fandraisam-bahiny fandraisam-bahiny” an'i Scott dia miatrika ny olan'ny mpiasa ary mihevitra ny fahaiza-manao matanjaka sy malefaka ilaina amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny mba hitehirizana sy hambinina. Amin'ny faran'ity volana ity dia handray anjara amin'ny fandaharam-pampiofanana Croix Rouge faharoa ny mpikambana ao amin'ny ekipa mba hiantohana ny fiarovana sy ny fiarovana ny vahiny sy ny ekipa. "
Eo alohan'ilay atrikasa dia nanomana “Spirit of hospitality” Audit Audit i Dr Smith izay nampiasa ireo mari-pamantarana Key Performance vaovao izay napetraka ary niara-niasa tamin'ny fitantanana sy ny mpiasa mba hamolavola programa fiofanana hamaly ny filan'ny trano fisakafoanana.
"Ny tanjonay dia ny hamantatra ireo fotoana mety hihoatra ny andrasan'ny mpanjifa ary hamorona fotoana hahatsiarovan-tena tsara izay gaga sy mahafaly ny vahiny rehetra mitsidika ny Camp Cardamom Tented." hoy i Dr Smith.
The Campamom Tented Camp dia fahatsapana fiaraha-miasa tokana eo amin'ny ONG roa - Wildlife Alliance sy ny Golden Triangle Asian Elephant Foundation (noforonin'ny Minor Group) - sy YAANA Ventures, mpandrindra ny toby. Ny fiaraha-miasa dia natao hiarovana ny 180km2 amin'ny faritra arovana isan-karazany amin'ny tontolo iainana amin'ny alàlan'ny famaranana ny asa tsy ara-dalàna, ny fitrandrahana ala ary ny fitrandrahana harena ankibon'ny tany. Any avaratry ny tobin-kevitry ny toby dia misy ny tany hodiovina hampiasaina amin'ny varotra. Any amin'ny atsimo-kolontsaina mono-kolotsaina novolavolaina. Ny toby sy ireo mpiambina tohanan'izy ireo dia zava-dehibe tokoa amin'ny fihazonana ny ala (ary hanomezana fotoana ny biby dia).
The Campamom Tented Camp, WTTC fizahan-tany farany ho an'ny Tomorrow Awards amin'ity taona ity, dia eco lodge sy tompon'andraikitra tompon'andraikitra tsy mitovy amin'ireo any Asia Atsinanana.
Ny Campamom Tented Camp dia ohatra iray tsara amin'ny fampandrosoana matotra ary manome lesona sarobidy ho an'ireo firenena manankarena sy tsy dia mandroso ary ny fampandrosoana sy ny fampandrosoana ara-toekarena no fototry ny toekarena maitso ary ampahany amin'ny filozofia mitambatra ho fampandrosoana nasionalin'i Kambodza.
Ny drafitra dia ny mba hitohizan'ny toby fanomezana vola ho an'ireo mpiambina mba hiarovana ity faritra biodiverse mampino ity mandritra ny fifanarahana fizahan-tany 50 taona. Ireo mpiambina 12 dia niasa tao amin'ilay faritra nanomboka tamin'ny 2013 ary tompon'andraikitra tamin'ny fidinana an-tsokosoko mihombo ary nijanona tanteraka amin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna. Tao anatin'ny dimy taona nitetezan'izy ireo ny isan'ny vela-pandrika hita dia nidina hatramin'ny 2,200 tamin'ny taona voalohany, ka latsaky ny 300 ny taona 2018. Ny fihazana amin'ny basy dia nijanona saika ny ankamaroany. Tsy mbola nisy sambo voarohirohy nanomboka tamin'ny 2014.
WTTC: Toekarena fitsangatsanganana sy fizahantany lehibe indrindra any Afrika Atsimo amin'ny taona 2018
Ny filankevi-pitantanana Brand USA dia manaiky ny fanendrena komity